Experienceacleaner Tweeting with Buzzom Desktop. Get Buzzom Desktop to manage your twitter account.
Twitter(ट्विटर) एउटा माइक्रोब्लगिङ साइट, जसमार्फत आफ्नो स्टाटस भनौँ या समाचार या जानकारी पलपल अपडेट गर्न सकिन्छ । प्रायलाई थाहा नै होला, दिनानुदिन ट्विटर मार्फत आफ्ना स्टाटस ट्विट गर्ने को संख्या बढ्दैछ । यहि ट्विट गर्नका लागि सयौँको संख्यामा क्लाइन्ट एप्लिकेशनहरु बनेका छन् । ट्विटरफिड देखि ट्विट डेक सम्म का क्लाइन्ट एप्लिकेशनहरु मार्फत ट्विट गर्ने गरिएको छ । तर ती एप्लिकेशन मार्फत चाहिएका भन्दा नचाहिएका ट्विट बढि आयो, स्पामिङ भयो भनेर निकै गुनासो आउने गरेको छ । ट्विटरका प्रयोगकर्ताहरु ट्विटर मार्फत आफ्नो व्यापार, व्यवसाय बढाउन चाहन्छन्, अत नेटवर्क त ठूलो हुने नै भयो, तर यही नेटवर्क का कारण ट्विटर ले समेत धान्न नसक्ने गरि अनि दिक्कै लाग्ने गरि ट्विटहर आउने गर्छन्, अर्थात स्पामिङ धेरै भो भनेर गुनासो आउने गरेको छ ।
तर अब भने यहि ट्विट को कारण ले समस्या झेल्नुपर्ने छैन, किनकी यस्तै स्पाम कन्ट्रोल गर्न या भनौँ आफ्नो लागि उपयुक्त हुने ट्विटहरु मात्र हेर्न मिल्ने गरि, एउटा नयाँ एप्लिकेशन बनेको छ । Buzzom Desktop नाम दिइएको यो क्लाइन्ट एप्लिकेशन बेङ्लोरमा अवस्थित InRev Systems ले भर्खरै लन्च गरेको हो । हुन त Buzzom ले पहिले नै सोसल मिडियामा तुफान ल्याइसकेको छ, Buzzom.com मार्फत ट्विटरमा फलो अनफलो गर्ने, स्टाटस अपडेट गर्ने, रिप्लाइ गर्ने, सर्च गर्ने आदि विविध कामहरु गर्न सकिन्छ । तर अब Buzzom Desktop ले सोसल मिडियामा तहल्का मच्चाउने अपेक्षा गरिएको छ । अरु एप्लिकेशन भन्दा पृथक र प्रयोगकर्तालाई स्पामिङ बाट बचाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको Buzzom Desktop ले प्रयोगकर्तालाई एउटा छुट्टै अनुभुति दिन्छ । त्यसबाहेक Buzzom Desktop मा प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न ग्रुपमा राख्न सकिन्छ, यतिमात्र होइन प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना ट्विटहरुलाई फिल्टर गर्न सक्छन्, चाहिएका ट्विटमात्र हेर्न र पढ्न सक्छन् ।
Buzzom Desktop को अर्को उल्लेखनिय फिचर भनेको, प्रयोगकर्ताहरुले प्रोफाइल, वायो, लोकेशन आदिका आधारमा ट्विट हेर्न र पढ्न सक्छन् । जसका कारण कुन ठाउँमा के कस्तो छ, आदि सबै कुरा जान्न यो वरदान सावित भएको छ । स्थान विशेषका आधारमा व्यापार व्यवासाय को बारेमा जानकारी लिन मिल्छ । खासमा भन्ने हो भने, Buzzom Desktop भनेको ट्विटगर्ने मात्र नभइ धेरै थोक हो । दिक्क लाग्ने गरि आउने ट्विट मन पर्दैन भने, त्यस्ता ट्विटलाई लुकाउन मिल्छ, आफूले छानि छानि आफू अनुकुल ट्विटहरु हेर्न सकिन्छ । आफ्नो चाहना अनुसार, ट्विट गर्न सकिने, पढ्न सकिने…छैन त यो Buzzom Desktop गज्जब को ?
उदाहरण को लागि, यदि मलाई, मैले फलो गरिरहेका वेव डिजाइनरहरु को मात्र ट्विट हेर्न मन लाग्यो भने म वायोमा ‘web designer and css’ भन्ने keywords राखेर सर्च गर्छु, नतिजा तुरुन्तै निस्कन्छ । Buzzom Desktop ले सहज रुपमा वेव डिजाइनरहरुको मात्र ट्विट देखाउँछ । यस्तै यस्तै features का कारण, बढ्दो स्पामिङ बाट सहज रुपमा छुटकारा पाउन सकिन्छ, अर्थात भनौँ कम समय मा, सहज रुपमा, आफ्ना लागि उपयुक्त ट्विटहरु हेर्न सकिन्छ । भएन त समय को बचत ? हेर्नुस् यो स्क्रिनसट्:
अब आफूलाई मन परेको ट्विटहरु देखिसकेपछि खुशि त पक्कै लाग्छ । यसका साथै प्रयोगकर्ताहरु ले ट्विटकर्ताहरुलाई सजिलै मेसेज गर्न सक्छन्, त्यही ट्विटलाई रिट्विट गर्न सक्छन् अनि मन परेन भने त्यस्ता ट्विटलाई लुकाइदिनसक्छन् । ट्विट को दायाँ तर्फ RT, DM, Reply, Sent the user to group तथा Hide Account भन्ने वटनहरु रहेकाछन्, प्रयोगकर्ताहरुले एउटा क्लिक को भरमा सबै काम तमाम गर्न सक्छन् । सायद, यी कुराहरु बाट Buzzom Desktop मार्फत कसरी ट्विटहरु फिल्टर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले थाहा पाउनुभयो होला ।
Buzzom Desktop को अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको प्रयोगकर्ताहरु ले फलो नै नगरिकन सेलिब्रेटि देखि टेक्नोलोजी सम्म का ट्विटहरु हेर्न सकिन्छ । Other Groups शिर्षकमा Buzzom Desktop को वायाँ छेउमा रहेको Celebrity, Design, Economy, Entrepreneur, News, Politicians, Social Media, Sports, Technology आदि शिर्षक मा क्लिक गरेर आफ्नो चाहना अनुसार को ट्विट गर्न सकिन्छ, ट्विट हेर्न को लागि फलो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । Buzzom Desktop ले पहिले नै यी विभिन्न ग्रुपमा ट्विटहरु हेर्न मिल्ने गरि बनाइदिएर प्रयोगकर्ताहरुलाई ठूलो गुन लगाएको छ ।
त्यसबाहेक प्रयोगकर्ताले यसमार्फत ट्विट गर्दा लिंकहरु छोटो गरिरहनु पर्दैन, Buzzom Desktop ले अटोमेटिक रुप मै लामो लिंकहरुलाई nxy.in मार्फत छोटो लिंक मा बद्लिदिन्छ । त्यस्तै, प्रयोकर्ताहरु ले १० वटा सम्म ट्विटर एकाउन्टलाई एउटै Buzzom Desktop मार्फत म्यानेज गर्न सक्छन् । साथै, प्रयोगकर्ताहरुलाई कुनै फाइल, फोटो या भिडियो अनलाइनमा सेयर गर्नु पर्‍यो भने एकाउन्ट बनाएर, अपलोड गरेर सेयर गर्नुपर्छ तर Buzzom Desktop मार्फत प्रयोगकर्ताहरु ले drag and drop को आधारमा आफ्ना फाइलहरु अनलाइनमा सेयर गर्न सक्छन् । तपाई ट्विट गर्नु हुन्छ भने धेरै सुविधाहरुले भरिपुर्ण Buzzom Desktop उत्तम विकल्प हुनसक्छ । एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, फरक अनुभव गर्नुहुनेछ । स्मरणिय रहोस्, buzzom.com ले सोसल मिडियामा आफ्नो उपस्थिति जनाएर तहल्का मच्चाइसकेको छ । अब Buzzom Desktop मार्फत आफ्नो उपस्थितिलाई झनै सशक्त पार्दैछ ! प्रयोग गर्नुहोस्, फरक आफैँले थाहा पाउनुहुनेछ ।
Download: Buzzom Desktop
Eternal August 27, 2009 at 12:30 PM
Ali ali matra bujhiyo...tyo bujheko ni confusing...k ho k...
दूर्जेय चेतना August 28, 2009 at 6:52 PM
बास्तबमा मलाई पनि केही थाहनै छैन यसबारेमा तर तपाईको यो लेख पढेर अलि अलि आईडिया भने भयो र यसको महत्व बुझ्न सके। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, प्राबधिक कुरा भएको ले कता कता अल्मलिन भने छोडिन है।
Aakar August 30, 2009 at 9:15 AM
ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने, यसको उपयोगिता बुझ्न सजिलो हुन्छ । साधारण रुपमा बुझाउँदा, तपाई जिमेल बाट सिधै च्याट गर्नसक्नुहुन्छ, तर तपाई च्याट गर्न कै लागि जिमेल मा साइन इन हुनु जरुरी छैन । तपाई, जिटक, इबडि जे बाट पनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो सफ्टवेयर पनि त्यस्तै हो, तपाई ट्विटर मा आफ्नो स्टाटस अपडेट गर्नुहुन्छ भने, हरेक पटक ट्विटरकै साइट मा पुगिरहनुपर्ने जरुरी छैन । तपाई यो सफ्टवेयर बाट, स्टाटस अपडेट गर्नसक्नुहुन्छ, अनि यसको विविध सुविधा ले तपाईलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छ । अत: यो पोष्ट मा यो सफ्टवेयर को बारेमा लेखिएको छ, अनि यसको विशेषता पनि प्रस्ट पार्ने कोशिस गरिएको छ ।